Amabhishi amahle kakhulu eGranada, ukuvakasha kweCosta Tropical | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | 20/09/2021 14:00 | I-Granada, Amabhishi
I-Las Amabhishi eGranada ziyisampula semidwebo ehlukile yalesi sifundazwe saseSpain. Kumakhilomitha ambalwa kakhulu, amazwe aseGranada adlula esuka ezindaweni eziphakeme ze- I-Mulhacen, eSierra Nevada (lapha siyakushiya indatshana ekhuluma ngaleli banga lezintaba), ogwini lwaseMedithera. Ngenxa yalesi sizathu, kwezinye izindawo ogwini lusemqansweni.
Kodwa-ke, lesi akusona isithiyo sogu lwaseGranada (olwaziwa nge Ugu lwaseTropical) inezindawo ezinesihlabathi esihle kakhulu lapho ungajabulela khona ukuthamela ilanga noma ukugeza. Sekukonke, omasipala abayishumi nesishiyagalombili bakha ugu lwalesi sifundazwe, abanye babo abanokuheha okukhulu kwabavakashi. Lokhu kunjalo, isibonelo, I-Motril, USalobreña o I-Almunecar. Kepha, ngaphandle kokuchitha isikhathi, sizokukhombisa amanye amabhishi amahle kakhulu eGranada.
1 Kusuka e-Almuñécar kuya e-Albuñol
1.1 Ibhishi laseSan Cristóbal
1.2 Ibhishi laseLa Charca
1.3 ICalahonda, elinye lamabhishi amahle kakhulu eGranada
1.4 ITorrenueva Ibhishi
1.5 Ibhishi laseRijana
Kusuka e-Almuñécar kuya e-Albuñol
ICosta Tropical ihlala endaweni encane kakhulu yolwandle iMedithera. Angamakhilomitha-skwele angamakhulu ayisishiyagalombili kanti inhlokodolobha yawo engekho emthethweni yiyona esivele ishiwo I-Motril. Kodwa-ke, inamabhishi amahle futhi athokomele. Sizokhuluma nawe ngamanye.
Ibhishi laseSan Cristóbal
Ebizwa nangokuthi de I-China, ulwandle olukhulu lwasemadolobheni lwase I-Almunecar. Ingaphezulu nje kwekhilomitha ubude futhi cishe ngamamitha angamashumi amahlanu ububanzi. Ukwakheka kwayo ikakhulu kufaka isihlabathi esimnyama futhi amanzi ayo azolile.
Uzoba nentshisekelo yokwazi ukuthi ngubani ophethe le miklomelo ifulegi eliluhlaza okwesibhakabhaka no-Q ngekhwalithi, efanele abantu abakhubazekile futhi enendawo yokupaka izimoto. Inayo yonke imishini. Kunezinsizakalo zokuvikela abagulayo, izihlambi, ukuqashwa kwendawo yokulala, indawo yokuhlanza ngisho nehhovisi lezivakashi, imigoqo nezindawo zokudlela eziseduze.
Kunoma ikuphi, akulona ukuphela kolwandle ongaluthokozela e-Almuñécar. Nawo mahle kakhulu I-Cantarriján, eqoqwe futhi enesiko elide lama-nudist; lokho kwe I-Velilla, ikulungele ukujwayeza ukudilika, noma lokho kwe ISango Lolwandle, futhi nasemadolobheni.
Ngakolunye uhlangothi, njengoba use-Almuñécar, sikucebisa ukuthi uvakashele leli dolobha elihle laseGranada. Izindawo ezifana ne- isigodlo saseSan Miguel, inqaba yemvelaphi yamaSulumane ebusa idolobha kusuka phezulu. Kepha ungavakashela nezinsalela zomsele wamanzi namabhati amaRoma noma amahle Isigodlo saseNajarra, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX leminyaka ngokulandela imigomo yesitayela se-neo-Arab.
Ekugcineni, ungabona okuthakazelisayo Izigodlo Eziyisikhombisa Umgede Womlando Wokuvubukula, ingadi yezitshalo ye UMajuelo futhi i ISiphambano Esingcwele, lapho unombono onikeza ukubukwa okumangazayo kogu lwaseGranada.
Ibhishi laseLa Charca
Yaziwa nangokuthi del Salomar, ulwandle olukhulu lwasemadolobheni lwase USalobreña. Cishe ngamamitha angamakhulu ayishumi nesishiyagalombili ubude futhi ububanzi baso cishe baba ngamamitha angamashumi ayisithupha nane. Izungezwe uhambo oluhle oluhle, ulwandle oluhle lwemindeni.
Ngaphezu kwalokho, lolu lolwandle lunazo zonke izinto ezidingekayo zokwenza ukuhlala kwakho kulo kube mnandi. Inezinsizakalo zokuhlenga, izindlu zangasese namashawa, izando nezindawo zokuqasha izikebhe.
Ngokufanayo, kokunye ukweqisa kwayo i Idwala laseSalobreña, isikhala semvelo esivikelwe inani laso eliphakeme lemvelo. Izimila zayo zimelela izindawo ezinamadwala asolwandle ezinamanzi asogwini lwaseGranada futhi ungavakashela kuwo unyaka wonke.
Leli akulona kuphela ibhishi elinconywayo kumasipala. Labo unogada, ngaphesheya nje kwedwala; lokho kwe UMfula Point, etholakala endaweni yamaxhaphozi kanye ne- ICambrón kanye neCaletón coves.
Ngakolunye uhlangothi, njengoba useSalobreña, thatha ithuba lokuvakashela leli dolobha elihle. Ungayeki ukukhuphuka okumangalisayo inqaba lokho kuyabusa futhi kungamaSulumane ngesitayela. Ngokufanayo, ezindaweni ezifana ne-El Brocal ne-Albaicín uzothola imigwaqo emincane enezindlu ezimhlophe ezigcwele izimbali.
Ekugcineni, vakashela i- ISonto Lethu Lady of the Rosary, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX leminyaka kulandela izigaba zesitayela seMudejar. Umbhoshongo waso ugqamile, kufakwe izinsika ezinyathelwe, nomnyango oseceleni, kuhlotshiswe ngamathayili. Kunoma ikuphi, lapha sikushiya i-athikili ebekelwe uSalobreña ngokuphelele.
ICalahonda, elinye lamabhishi amahle kakhulu eGranada
Manje sesiphendukela kumasipala we I-Motril ukukutshela ngendawo yesihlabathi evela kuyo yonke imikhombandlela eya emabhishi amahle kakhulu eGranada. Imayelana nokumangalisa UCalahondaIphinde ibe yasedolobheni, yize inezimo ezinesono, ngoba idala uhlobo lwe- "S" ogwini.
Inobude cishe bamamitha ayi-XNUMX nobubanzi obumaphakathi obungamashumi amahlanu. Amanzi alo azolile, yize evulekile futhi elungele ukuphefumula komoya kanye ne-kitesurfing. Ngokuqondene nendawo enesihlabathi, iqukethe amatshe. Inazo zonke izinsizakalo ongazidinga: ukutakulwa, izindlu zangasese namashawa, ukupaka izimoto, izando nezambulela. Ezindaweni ezizungezile, unezindawo eziningi zokuphuzela nezindawo zokudlela kanye nendawo yokuhlala kanye ne- amatende.
Leli bhishi lihle futhi lihlome kahle kangangokuba linokuhluka ifulegi eliluhlaza okwesibhakabhaka no-Q ngekhwalithi. Right kwesinye seziphetho sayo futhi unamathele kuso Ibhishi laseGranada, mncane ngandlela thile, kepha ngokungajwayelekile.
Akuzona zodwa izindawo ezinesihlabathi ezivelele kumasipala waseMotril. Sikweluleka nokuthi uye ebhishi lase La Joya, incane futhi yamukelwa ngokwengeziwe ngokuba sekupheleni kwewa. Kodwa-ke, lesi simo singakudikibalisa, ngoba ukuze usifinyelele kuzodingeka wehle izinyathelo ezingamakhulu amabili. Bese uwafaka ukuze ahambe.
Mikhulu kunale eyedlule amabhishi e- ENtshonalanga, etholakala e-El Varadero, lapho kukhona nechweba leMotril, nalokho kwe UCarchuna, ezinyaweni ze ICape Sacratif, lapho ungabona khona indlu yesibani eyakhiwe ngo-1863.
Kepha unezinye izinto eziningi ozozibona kuMotril. Into yokuqala ezokunaka kuleli dolobha elihle laseGranada yizindawo eziningi zokugaya ushukela eyayinazo esikhathini esidlule. Isibonelo sabo yilezo zeNuestra Señora del Pilar neNuestra Señora de las Angustias, eyaziwa nangokuthi iFabriquilla.
Kufanele futhi ubone izinsalela zefayela le- Amakhandlela, umsele wamanzi wakudala wekhulu le-XNUMX. Ngokuqondene nezakhiwo zenkolo, bagqamisa Isonto elikhulu le-Incarnation, eyakhiwe ngesitayela se-Gothic-Mudejar, kanye ne- Indawo Engcwele Yomama Wethu Wenhloko, etholakala eCerro de la Virgen futhi enesithombe sosanta waseMotril.
Ngokwengxenye yalo, ngokwakhiwa komphakathi edolobheni laseGranada, sikucebisa ukuthi uvakashele i- indlu ka-Countess ka-Torre-Isabel, ngesitayela sayo se-neoclassical, kanye ne Indlu yeBates, enezingadi ezimbili, iGeneralife neBusika. Futhi ngokufanayo, i- Indawo yaseshashalazini yaseCalderón de la Barca, nokuma kwayo kwegobolondo; okudala Isibhedlela saseSanta Ana, exhunywe esontweni iDivina Pastora kanye nokwakhiwa kwe- Iholide laseDolobheni, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX.
I-Torrenueva, elinye lamabhishi amahle kakhulu eGranada
Kutholakala edolobheni elinamagama e UTorrenueva Costa, ingenye yamabhishi amahle kakhulu eGranada. Inendawo engaphezudlwana nje kwekhilomitha nohhafu futhi yakhiwa isihlabathi esimnyama namatshe. Amanzi alo azolile futhi ahlanzekile.
Konke lokhu kwenza lolu lwandle lwasemadolobheni lube ngolunye olufanele kakhulu ukuthi uhambe nomndeni wakho. Ngoba, ngaphezu kwalokho, ikunikeza zonke izinsizakalo. Kukhona ukutakula, izindlu zangasese namashawa, ukuqasha amalanga nezambulela, ukufinyelela kubantu abakhubazekile ngisho nezindawo eziluhlaza kanye nezinkundla zebhola likanobhutshuzwayo nolwe-volleyball.
Njengokungathi konke lokhu bekunganele, endaweni ezungezile unemigoqo eminingi nemigoqo yasolwandle lapho ungadla khona. Futhi-ke sikucebisa ukuthi uvakashele leli dolobha elihle, elenziwe ifrimu ngu- idwala likaJolúcar. Kugqame kuwo umbhoshongo wenqaba, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX ukuvikela ugu ekuhlaselweni abaphangi. Isigubhu sekhulu le-XNUMX leminyaka esikhumbula isikhathi esedlule sezolimo sendawo sikufanele nokuvakashelwa nguwe.
Ekugcineni, sikweluleka ukuthi usondele kufayela le- Isikwele sika-Antonio Cortés, lapho uzobona khona isikebhe sokudoba njengesikhumbuzo sokuhlonipha abadobi bedolobha. Futhi nokuthi uvakashela i- Isonto leNkosikazi Yethu yaseCarmen, eseneminyaka engaphezu kwekhulu ubudala.
Ekugcineni, sizokutshela ngaleli bhishi elisedolobheni lase UGualchos-Castell de Ferro. Cishe uyintombi nto ngokungakaze ube nomsebenzi omningi, kulungile ukuthi uchithe usuku olunokuthula uzijwayeze ukutshuza, ngoba impilo yaso yasolwandle icebile kakhulu.
Futhi ngokuhamba kwesikhathi, uma indlala yakho ivukile, unganambitha ezinye zezibiliboco zeGranada cuisine. Ngokwesibonelo, imvuthu eyenziwe ngofulawa kakolweni, i-cauldron noma izinhlanzi ezintsha ezivela ogwini. Kepha, uma ufuna okuthile okunamandla ngokwengeziwe, une- imbiza yeSan Antón, isitshulu sikabhontshisi, ubhontshisi obanzi omisiwe, ilayisi namasoseji egazi. Ekugcineni, njengama-dessert, une- ubisi olusontekile noma i ikhekhe lasebukhosini.
Sengiphetha, sikubonise ezinye zefayili ye- amabhishi amahle kakhulu eGranada. Kuzo uzojabulela usuku oluhle futhi olungalibaleki eCosta Tropical. Kepha kukhona amanye amabhishi anconywe ngokulinganayo. Isibonelo, ungazi lezo zeLa Herradura neLos Berengueles e-Almuñécar noma owaseRussia e-Albuñol, okuyi-cove encane engacekiwe ongayifinyelela ngezinyawo noma ngolwandle kuphela. Kuyathakazelisa ukuthi lithola lelo gama ngoba umuntu owayevela ezweni elaliyiSoviet Union wahlala kulo ngo-1921. Kunoma ikuphi, alukho kulamabhishi oluzokudumaza.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Amabhishi » Amabhishi amahle kakhulu eGranada